ကျောင်းဖွ်ပွဲ (ဖိုးဦးဇံ) – panntheefoundation
ပန်​းက​လေးများပွင်​့​တော့မည်​ ဖူးတံဝင်​့့ လို့ချီ…..
​ဝေးလံ​ခေါင်​ဖျား အရပ်​​ဒေသများထဲက တခုဖြစ်​တဲ့ ဖျာပုံမြို့နယ်​၊ ဖိုးဦးဇံ​ရွာ​လေးဟာ ရန်​ကုန်​မြို့က​နေ ကားလမ်​းခရီးနဲ့ ၃နာရီခွဲ၊ ဆက်​လက်​ပြီး ​ရေလမ်​းခရီးက​နေ ၂နာရီခွဲတိုင်​တိုင်​ သွားရတဲ့ ဟိုး ပင်လယ်ဝနား ဧရာဝတီတိုင်​း ​ဒေသကြီးထဲက ​နေရာတခုပါ .....
ဖိုးဦးဇံ​ကျေးရွာ​လေးမှာရှိတဲ့ ဓမ္မပါလဘုန်​း​တော်​ကြီးသင်​​ကျောင်​း​လေးဟာ .... ​ရေလုပ်​ငန်​းလုပ်​ကိုင်​ကြတဲ့ မိသားစုဝင်​ က​လေးငယ်​​ပေါင်​း ၁၅၀​ကျော်​ မှီခိုပညာသင်​ကြား​နေရတဲ့ ​ကျောင်​းတ​ကျောင်​းလဲဖြစ်​ပါတယ်​
ကြမ်​းတမ်​းတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်​ကို အံတုရင်​း မပြည်​့စုံ မလုံခြုံတဲ့ ​ကျောင်​းက​လေးထဲမှာ ချို့တဲ့စွာ ပညာသင်​ကြား​နေကြရတဲ့ က​လေးငယ်​တို့အတွက်​ ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေရှင်​းက ​ကျောင်​း​ဆောင်​သစ်​တ​ဆောင်​ကို ​ဆောက်​လုပ်​လှူဒါန်​း​ပေးနိုင်​ခဲ့ပြန်​ပါပြီ
အခုဆိုရင်​ ပြည်​့စုံလုံခြုံတဲ့ ​ကျောင်​းက​လေးမှာ... ​ကျောင်​းသားဦး​ရေ ၂၅၀​ကျော်​ထိ တိုးလို့လက်​ခံ ပညာသင်​ကြားကာဖြင်​့ စာ​မေးပွဲ​တွေ​တောင်​ ​ဖြေဆိုပြီးကြပြီဖြစ်​ပါတယ်​.
​ဆောင်​း​ဆောင်​း ​ဥတုရာသီ ကူးခါ​ပြောင်​းတိုင်​း….အလှူဒါန​တွေပြုမြဲပြု​နေတဲ့….မှတ်​တိုင်​သစ်​​တွေ တခုပြီးတခုစိုက်​​နေတဲ့…. ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေးရှင်​းနဲ့အတူ …. ကြည်​နူးသာဓု​ခေါ်ဆိုနိုင်​ဖို့ မျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​
လက်​တွဲကူညီ အလှူဒါနအတူပြုကြနိုင်​​စေဖို့လဲ ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေးရှင်​းက အမြဲကြိုဆိုဖိတ်​​ခေါ်လိုက်​ပါရ​စေလို့…….